Nagu saabsan - Shiinaha Beihai Maro adag Co., Ltd.
Shiinaha Beihai Fiberglass Co., Ltd. waxay leedahay 3 warshadood oo ay la socdaan 2100 shaqaale ah oo ku takhasusay soo saarista wax soo saarka Fibreglass-ka ee ku yaal Shiinaha.Waxaan soo saarnaa E-Glass iyo S-Glass fiberglass roving, xargaha la jarjaray, gogol isdabajoog ah, tolmo isku duuban oo tolmo ah, maro badan oo kala duwan, budo iyo emulsion gogol jeex jeexan, meeris tolmo wanaagsan, gogosha dusha ka samaysan, gogosha unugyada iyo FRP (maaddada fiberglass-ka la xoojiyey) alaabada sida albaabka FRP, dheriga ubaxa FRP, farshaxanimada FRP
Gaar ahaan, Shiinaha Beihai waxay leedahay teknoolojiyad muhiim ah oo eray-fasal ah oo loogu talagalay foornooyinka waaweyn ee E-Glass iyo 3 khadadka wax soo saarka (ballaca 1600mm, 2600mm iyo 3200mm) oo loogu talagalay soo saarista gogosha gogosha oo gogosha ah iyo 120 qalabka wax lagu tolo si loo soo saaro muraayadaha marshooyinka la tolay.
Waxsoosaarka sanadlaha ah ee wareegga marooyinka ayaa gaaraya 380,000 tan iyo marooyin xargo goglan oo gogosha ah oo gaaraya 66,000 tan iyo fiberglass oo lagu xardhay wareegga 33,000 tan.
1.3 warshadood oo ay la socdaan 2100 shaqaale ah oo ku takhasusay soo saarista waxsoosaarka maroobada.
2. In ka badan 10 sano oo khibrad ah in ka badan 18 qaybood oo wax soo saar ah oo bixin kara adeegyo hal-joogsi ah.
3.3 Khadadka wax soo saarka iyo 120 qalabka wax lagu tolo kuwaas oo siiya wax soo saar xasiloon si aan u xaqiijin karno waqtiga iyo bixinta degdegga ah.
Dhammaan alaabteenna oo leh heerar tayo caalami ah, badeecooyin ayaa loo dhoofiyaa Koonfur-bari Aasiya, Bariga Dhexe, Bariga Yurub, Koonfurta Ameerika, Waqooyiga Ameerika iyo suuqyo kale oo waaweyn oo dibedda ah.
Kooxda 5.R & D iyo farsamooyinka casriga ah si ay si wax ku ool ah u siiyaan dhammaan noocyada wax soo saarka caadiga ah iyo alaabada loo habeeyay.
6.Waxaan leenahay waaxyo tayo gaar ah leh si loo hubiyo in aysan jirin dhibaato tayo leh inta aan la keenin ka hor.
7.Eport-ku wuxuu ahaa ku dhowaad toban sano oo taariikhi ah, wuxuu soo aruuriyay khibrad hodan ah oo aqoon u leh shahaadada dukumintiga iyo habka dhoofinta taasoo ku siineysa adeegyo xirfad dhoofineed professional
8. Iyadoo la raacayo baahida macaamiisha ee noocyada lacag-bixinta oo dabacsan oo kala duwan. Sida L / C, T / T, midowga reer galbeedka, paypal, iwm.
9.24-saac kahor-iibinta internetka iyo adeegga iibka kadib si ay kuu siiso jawaab celin xirfadle ah oo waqtigeeda ku habboon.